शिल्पा र पुष्पको १५ मिनेटको 'मंगलम' युट्युब ट्रेन्डिङमा, पूरा फिल्म कहिले ? - www.dthreeonline.com
प्रकाशित मिति: बुधबार, जेठ ०७, २०७७ समय: १०:२९:३४
ईटहरी/ फिल्मको डिजिटल राईट्स लिने युट्युब च्यानलहरुको लागि हाल भैरहेको लकडाउन एकदमै फाइदाजनक हुन पुगेको देख्न सकिन्छ । घरभित्रै रहेका सिनेप्रेमीहरुलाई फुर्सद मेटाउने सजिलो माध्यम बन्न पुगेको छ युट्युब । जसको माध्यम बाट हलमा सार्बजनिक भैसकेका नेपाली फिल्महरु यतिबेला युट्युबमा एक एक गरि सार्बजनिक हुने क्रम जारी छ । यसैले पनि नेपालिहरुले सो फिल्महरुलाई युट्युबमा हेर्ने गर्छन । हलमा हेरेपनी युट्युबमा दोहोर्याएर हेरिरहेका छन् ।
जस्ले गर्दा युट्युबमा फिल्म अप्लोडकर्तालाई कमाई देखि भ्युज, सब्स्क्राईवमा फाईदा पुगिरहेको हुन्छ । यस्तै पेरिफिरिमा २ वर्ष अघि हलमा सार्बजनिक प्रदर्शन भएको फिल्म ‘मंगलम’ युट्युबमा सार्बजनिक भएको छ । तर, यो फिल्मको पूरा भाग भने सार्बजनिक नभएर १५ मिनेटको क्लिप लाई सार्बजनिक गरिएको हो । यसर्थ, अब छिट्टै पूरा फिल्म पनि युट्युबमा आउदैछ भन्ने बुझ्न सकिन्छ । हेर्नुस् सो १५ मिनेटको भिडियो क्लिप ।
डिजिटल राईट्स खरिद गरेको हाइलाईट्स नेपालले आफ्नो युट्युब च्यानलमा सो क्लिप सार्बजनिक गरेको छ भने पूरा फिल्म पनि यसै च्यानल मार्फत सार्बजनिक हुनेछ । सार्बजनिक सो क्लिप यतिबेलाव्यो समाचार तयार गर्दै गर्दा युट्युब ट्रेन्डिङको १५ औ स्थानमा उक्लिएको छ भने १ लाख ६० हजार भन्दा बढी हेरिएको छ । प्रतिक्रियामा धेरैले पूरा फिल्मको प्रतीक्षा गरिरहेका छन भने केहिले पृथ्वीराजको आवाजको ठाउमा सलोन बस्नेतको आवाज किन ? भन्दै आक्रोश पोखेका छन् ।
यो फिल्मले प्रेम, बिछोड र वियोगको कथा बताउँछ । यो फिल्ममा पुष्प खड्का, पृथ्वी राज प्रसाईं र शिल्पा पोख्रेलको प्रमुख भुमिका छ भने नायिका साम्राज्ञी राज्य लक्ष्मी शाहलाई पनि अतिथि भुमिकामा अटाईएको छ । नायिका शिल्पा पोख्रेल प्रस्तुतकर्ता रहेको फिल्मका कार्यकारी निर्माता छविराज ओझा हुन् । फिल्मलाई नवल नेपालले निर्देशन गरेका हुन् । फिल्मको निर्मातामा दिजेन्द्र शाक्य, साकार ओझा र ओम गुरुङ रहेका छन् भने विष्णु घिमिरेको छायांकन, दिपक शर्माको संगीत, गोविन्द फुँयालको कथा रहेको छ ।